Best Nepal News – Daily News
अष्ट्रेलियामा नेपाली युवकलाई ‘ब्लड क्यान्सर’ ,अर्जुन अपिल गर्छन् -‘कृपया मलाई बचाईदिनुहोस् ! - Nepal Insider
मकवानपुरमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
सभामुख छान्न ओली र प्रचण्ड छलफलमा, वामदेव भन्छन्- प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्न दिऊँ
५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । उनले दुई मन्त्रालयमा मन्त्री पद खाली राखेर चार राज्यमन्त्री थप गर्ने तयारी गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले ओखलढुंगाका अम्बिर गुरुङ, इलामका राम राना, झापाकी जसमाया गजमेर र मोरङका विजय विश्वासलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । चारैजनालाई आइतबार अपराह्न सपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । दुई मन्त्रालय खाली, ठेकेदारलाई राज्यमन्त्री मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, अम्बिर गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार, राम रानालाइ भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विजय विश्वासलाई…
ताजा खबरLeaveacomment
अष्ट्रेलियामा नेपाली युवकलाई ‘ब्लड क्यान्सर’ ,अर्जुन अपिल गर्छन् -‘कृपया मलाई बचाईदिनुहोस् ! – Nepal Insider
सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर ३ वर्षअघि अष्ट्रेलिया उत्रिएका एक नेपाली युवकलाई ब्लड क्यान्सर देखिएको छ ।पोखरा स्थाई घर भएका अर्जुन तिमल्सिनालाई ब्लड क्यान्सर देखिएको हो । उनी अष्ट्रेलियाको व्रिजवेनमा बस्दै आएका छन् । ३० वर्षिय तिमल्सिना श्रीमतिलाई नर्सिङ पढाउन डिपेन्डेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया आएका हुन् ।अचानक क्यान्सर देखिएपछि भर्खरै पढाई सकेर संघर्ष गरिरहेका दम्पत्ति रुनुकी हास्नुको स्थितीमा पुगेका छन् ।अझ विडम्वना, क्यान्सर देखिएकै हप्ता यो दम्पतिले नवजात शिशुलाइ जन्म दिएका थिए ।श्रीमती सुत्केरी गराउन अस्पताल भर्ना भएकै बखत तिमल्सिनालाई झाडापखालाले सताएको थियो ।केही दिनसम्म पनि पखाला निको नभएपछि रगत परिक्षण गर्दा…
५ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच बालुवाटारमा भेट भएको हो । त्यसलगतै अपराह्न ४ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । दुई नेताबीच सभामुखको उम्मेदवारबारे छलफल भए पनि के सहमति भयो भन्ने बाहिर आएको छैन । “https://www..com/2020/01/829686″>Source link
५ माघ, हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ स्थित बसले ठक्कर दिँदा ४० वर्षीय भीमराज स्याङतानको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले काठमाडौँबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना ७ ख ३८४४ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेका साइकलयात्री स्याङतानलाई शनिबार राति ठक्कर दिँदा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिए । बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । “https://www..com/2020/01/829687″>Source link
५ माघ, काठमाडौं । सभामुख उम्मेदवारमा सहमति कायम गर्न सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्न प्रचण्ड आइतबार बिहानै बालुवाटार पुगेका हुन् । नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसकेका कारण प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना पुग्दा पनि संसदको नियमित कारवाही अघि बढ्न सकेको छैन । यसबीचमा पटक–पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि आफूले राजीनामा दिने बताएकी छन् । उनी आफैं सभामुखको दाबेदार हुन् र…
आजबाट मौसम पूर्ण रूपमा सुधारिन्छ : मौसमविद्
५ माघ, काठमाडौं । केही दिनदेखिको बदली, वर्षा र हिमपातको श्रृंखला रोकिएर आजदेखि मौसम पूर्ण रूपमा सुधारिने अनुमान मौसमविद्ले गरेका छन् । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभा निस्तेज भएकाे छ र मौसम घमाइलो बनेको छ । हाल देशको पूर्वी भू–भागलगायत मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली भए पनि बाँकी भू–भागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएकाे छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ५ दशमलव ९ डिग्री र अधिकतम १६ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज सबैभन्दा कम…
५ माघ, बुटवल । अदालतको आदेशले अवरुद्ध बुटवलको चौराहा-चिडियाखोला सडक क्षेत्रका घर धनीलाई थप कागजात र प्रमाण पेश गर्न बेलहिया-बुटवल ब्यापारिक मार्ग आयोजनाले आग्रह गरेको छ । यो सडक खण्डमा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका १५६ घर मध्ये ६ जनाको घरजग्गाबारे थप प्रमाण आवश्यक परेकाले १५ दिनभित्र पेश गर्न आयोजनाले सूचना जारी गरेको छ । यो सँगै सडक विस्तारको काम अझै लम्बिने भएको बछ । आयोजनाले कमलादेवी श्रेष्ठ/कृष्णकुमारी श्रेष्ठ,जनक कोइराला,किशोरकुमार श्रेष्ठ/निर्मला श्रेष्ठ,शायरा खातुन र जीवनलाल बज्राचार्यलाई थप प्रमाण र कागजात पेश गर्न भनेको हो । १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रमाण…
हृयारी र मेगनको शाही उपाधि हट्यो
५ माघ, काठमाडौं । बकिङघम दरबारले राजकुमार ह्यारी र मेगन अब राजपरिवारको औपचारिक सदस्य नरहेको घोषणा गरेको छ । ह्यारी र मेगनले हालै मात्र राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यको भूमिका परित्याग गर्ने र आफ्नो समय बेलायत र उत्तर अमेरिकामा बिताउने घोषणा गरेका थिए । राजपरिवारमा छलफलपछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथले त्यसलाई मन्जुरी दिएकी छन् । दरबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ड्युक र डचिस अफ ससिक्स अब राजपरिवारको औपचारक सदस्य नरहने र उनीहरुले शाही उपाधि प्रयोग गर्ने छैनन् ।’ ब्रिटिस राजपरिवारका शाही उपाधि प्राप्त सदस्यहरुलाई ‘रोयल हाइनेस’ भन्ने चलन छ । अब ह्यारी र मेगनले…
उद्योगी–व्यवसायी सरकारको ज्वाइँ !
५ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र उद्योग राज्यमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारसँग नर्तकिन आग्रह गरे । गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी–व्यवसायीलाई बालुवाटारमा भेटेर लगानीका लागि उत्साही पार्न खोजे । त्यस क्रममा उनले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएर आर्थिक उन्नति नहुने बताउँदै सरकार त्रसित बनाउने पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याए । ‘यो सरकारले तपाईंहरूको मनैदेखि त्रास हटाउने काम गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार तपाईंहरूको सहयोगी मित्र भएकाले कारोबारलाई सहज बनाउने काम गर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि उद्योगी–व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर आर्थिक समृद्धिको…
५ माघ, बुटवल । नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ (युनिकम) प्रदेश ५ को अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । शनिबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा भएको अधिवेशनले राजन अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । जसको उपाध्यक्षमा माधव ज्ञवाली, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेत्र अर्याल, सचिवमा विमल अर्याल कोषाध्यक्षमा सुरज रिमाल, उपसचिव संगठनतर्फ जीवन घिमिरे, प्रचार प्रसारतर्फ यादव आचार्य, श्रम तथा शिक्षातर्फ खेम खत्री रहेका छन् । त्यस्तैगरी सदस्यहरुमा जानु न्यौपाने, विष्णु रिजाल, महेश भण्डारी, सुदन गैरे, नोखिराम भण्डारी, भेषराज भण्डारी टंक बञ्जाडे र झनक बस्नेत रहेका छन् । अधिवेशनले नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ…